ICapricorn kunye neVirgo Compatibility: ♥ Uya Kuphila Ngolonwabo Naphakade - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neVirgo: ♥ Bangaphila Ngokonwaba Naphakade
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neVirgo kusekelwe kwimilinganiselo yemveli kunye neminqweno, nangona kunjalo abanalo ikhemistri yendalo kwigumbi lokulala kwaye banokudinwa.
I-duo ezinzileyo kwaye eqinisekisayo, le miqondiso mibini yoMhlaba ikwi-osmosis ngokugqibeleleyo xa kuziwa ekudaleni ikhaya elizolileyo neliqinisekisayo. Ukuba banabantwana, abayi kuba yinto entsha kakhulu kwiindlela zabo zemfundo, kodwa yintoni enhle i-avant-garde, ithi iCapricorn, ayizange ikwazi ukumelana novavanyo lwexesha. Imigaqo emidala emihle yokwakha isazela sokuziphatha iya kuthandeka kwiimpawu ezimbini eziya kuviwa phantse kuyo yonke intsimi ... Into kuphela elahlekileyo yinkanuko. Funda ngeenkcukacha ezithe kratya malunga nokuhambelana kweCapricorn kunye neVirgo kwaye ufumane amanqaku abo othando.
'I-Capricorn kunye neVirgo banamanqaku amaninzi anamandla afanayo.'
Inqaku lokuhambelana kweCapricorn kunye neVirgo: 2/5
Ezi zimbini Iimpawu zomhlaba bayafana kakhulu kwaye banokuphila kunye ngolonwabo, nokuba imisebenzi yabo yemihla ngemihla ayinamdla. Emsebenzini ubuntu Virgo kunye neCapricorn zenza iqela elikhulu kwaye baya kuzityala ngokwenene kwiiprojekthi zabo, kulungile ukutsho ukuba ingqalelo yabo kwiinkcukacha kunye nemfuno yemfezeko. Xa kuziwa ekubeni nobuchule, bobabini iVirgo kunye neCapricorn banzima ukufumana izimvo zabo. Ndikubudlelwane, I-Virgo kunye neCapricorn banesidingo sokwenene sokhuseleko kunye nokuzola, ubudlelwane obungazinzanga abuyi kubasebenzela. I-Virgo kunye neCapricorn bobabini bayasokola ukuvakalisa iimvakalelo zabo kwaye bafuna ukuthembela ngamnye ngokunzulu ngaphambi kokuvula, nangona kunjalo xa bethandana kudla ngokuba bubomi bonke.
Umoya ohlukeneyo weVirgo kunye neCapricorn yinto evumela ukuba bahlale kunye nempumelelo. Bayayazi indlela ukutshintshiselana ngamava ngcono kunaso nasiphi na esinye isibini kwizodiac, yaye oku kuya kubakhokelela ekubeni babe ngabahlobo bokwenene. Le miqondiso mibini yomhlaba iyavumelana kwiinjongo zabo, kwaye itsaleleka ukuba iqaphele iimpawu zamaqabane azalwa nazo.
Ngaba iCapricorn kunye neVirgo banobudlelwane obuyimpumelelo?
Kufuneka bathathele ingqalelo ukuba bangaphathani njengabantu abahlala nabo endaweni yezithandani, Virgo kunye neCapricorn ubomi bakho bokwabelana ngesondo kufuneka bube mnandi ukuba ubudlelwane bakho buphumelele! Imfihlelo yempumelelo yesi sibini lunxibelelwano oluvulekileyo kunye nolwelo, ukuba akunjalo baya kuphulukana nomnye. Bobabini iCapricorn kunye neVirgo bakhangwa yimilinganiselo efanayo, izinto ezifanayo kwaye ngokwenene, bobabini banqwenela ukwakha nokuphuhlisa ubudlelwane obuqinileyo. Ke, nokuba bathanda ukubambelela kwimikhwa, ubudlelwane babo bunokusebenza. Kubudlelwane, aba bantu bomthonyama bathanda ukuhlala bodwa, njengoko benamathele kwimikhwa kwaye bafuna ukhuseleko lwezinto eziphathekayo (nokuba akuthuthuzeli kakhulu).
Funda ngakumbi malunga noku ngena Iinyani ezili-15 malunga neCapricorn -
Nobabini nirhoxile kwaye aninxibelelani, kwaye kuya kufuneka nenze umzamo omkhulu funda indlela yokubeka incoko embindini wobudlelwane bakho, kungenjalo ukungaqondani kunye namagama arhabaxa kuya kubamba ngokukhawuleza! Ingxaki kukuba esi sibini sigxile kakhulu kwimpumelelo yobuchwephesha ukuze sinikeze indlela yokutshisa iimvakalelo zothando...
Akukho namnye kuni one-libido ephakanyisiweyo kwaye awukwazi ukufumana iintloko zakho malunga nendlela yokukholisa omnye nomnye kwigumbi lokulala! Yiba nobuchule ngakumbi! Eyona nto ibalulekileyo kubo bathatha umgama omde ngeemvakalelo zabo, nakwigumbi lokulala! Kubo uthando kufuneka lube nengqiqo kwaye akukho ndawo yokuphuphuma. Ngokuqinisekileyo kunye nabo, akuyi kubakho ukumangalisa okubi, bazinikele ubomi babo bonke.
Bamele balumke ukungaweli kukungakhathali okuthile kwaye ke ngoko guqukela kubomi obujongeka ngakumbi njengokuhlalisana kunothando.
Iingqikelelo ezi-5 ezidumileyo zePsychic eziye zazaliseka
Yintoni Umbala Wekhandlela Ngamnye Uluncedo kwaye Uthini Umyalezo Wawo?